Zucchini Lasagna: Ezi ntụziaka, dị mma ma sie ike!
A zukini lasagna bụ nhọrọ dị mma ma dị ụtọ nke ị ga-eji sie nri Italiantali a nke ghọrọ Brazil karịa afọ. Zucchini na-edochi mgwakota agwa ọka wit ahụ ma na-atọ ụtọ, ọkachasị maka ndị na-amasị akwukwo nri a.
N'isiokwu ndị na-esonụ ị ga-enwe ọtụtụ nhọrọ maka zucchini lasagna Ezi ntụziaka dị iche iche na ibu appetizing Efrata. Hụ nke ọ bụla ma họrọ ọtụtụ ị ga-arụ n'ụlọ!
Zucchini lasagna na chiiz
Lasagna na-enweghị chiiz na Brazil abụghị ihe lasagna. Ya mere, zucchini lasagna Ezi ntụziaka chọrọ chiiz, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị bụ onye anaghị eri anụ, maka ndị na-adịghị eri ihe ọ bụla sitere na anụmanụ.
Ihe na-esote bụ uzommeputa na-atọ ụtọ maka zucchini lasagna na cheese gratin dị ụtọ. Lelee!
3 nnukwu zucchinis
100 gram nke cheese Minas
100 gram nke grated parmesan cheese
350 grams nke sliced ​​mozzarella cheese
Mmanụ oliv, galik na ose
Nke mbụ ị ga-egbutu zucchini n'ime Mpekere nke Mpekere iji jee dị ka mgwakota agwa. Peoplefọdụ ndị na-ata anụ zucchini ma ọ bụ na-esi ya tupu ha etinye ya na mpempe akwụkwọ, nhọrọ ahụ bụ naanị gị.
A ga-etinye cheese nke Minas 100 gram na galik, ose na obere mmanụ. Ọ bụ oge mgbakọ. Tinye akwa mbụ nke zucchini, cheese Minas, obere mmanụ oliv, mozzarella na akwa zucchini ọzọ. Mechaa na zucchini na mozzarella oyi akwa n’elu.
Kpochapu oven wee hapụ lasagna ahụ maka nkeji iri abụọ na ọkara ọkụ. Akụkụ dị elu nke chiiz ga-agba aja aja ma tinye obere grames Parmesan, hapụ ya maka ihe dịka 20 nkeji na oven wee wepu ya, dị njikere iri nri.
Ọ bụrụ na echiche gị bụ ahụike na kichin dịkwuo mma, usoro nhazi nke a dị mma maka nri gị!
2 ma ọ bụ 3 zukini
30 gram nke ìhè mozzarella cheese
100 grams nke toki ara
150 grams nke obi chiiz
Pasili, chives na nutmeg
Will ga-egbutu zukini iji malite izukọta. Mgbe ahụ jiri nnu, nutmeg, pasili na chives mee ngwakọta ụlọ. Na mgbakwunye na ihendori tomato nke dịkwa mkpa ịdị njikere.
Ugbu a, ọ bụ oge mgbakọ. Gbakwunye mpekere zucchini, ngwakọta ụlọ na toki ara. Jiri akwa zucchini mechie, ihendori tomato na cheese mozzarella. Ebe ke oven na mgbe chiiz na-browned, ọ bụ ihe na-egosi na ọ dị njikere. Ọ na-ewe ihe dị ka nkeji iri abụọ ruo iri atọ.
Gụkwuo gbasara nri na-atọ ụtọ ma na-arụ ọrụ n'ụlọ iji mee n'ụlọ!
vegan zukini lasagna
Ọ bụrụ na ị gaghị eri ihe ọ bụla sitere na anụmanụ, usoro a na-atọ ụtọ!
2 nnukwu zucchinis
mmanụ oliv, nnu, ose
3 iko nke braised ọhụrụ mushrooms
2 iko nke tomato ihendori
Gwakọta mmanụ, nnu na ose na zucchini a na-egbutu ma ghee ha na skillet tupu ịmalite ịchịkọta efere ahụ.
Na tin, tinye zucchini, cheese vegan na ero. Mee nke a ruo mgbe ị gwụchara nke ikpeazụ nke zucchini, gbakwunye tomato ihendori, basil na vegan Parmesan. Ime ihe dị ka nkeji 20 ma ihe niile adịla njikere.
[junkie-alert style = ”green”] Gini banyere ifelata site n’iri? Chọpụta 101 LAR CARB RECIPES ma mụta otu esi esi nri dị ụtọ ma na-atọ ụtọ yana ihe ga-enyere gị aka ịkwụsị ibu ngwa ngwa! [/ junkie-alert]
Zucchini lasagna ya na anụ
Nhọrọ kachasị mma maka zucchini lasagna ya na anụ bụ iji mee zucchini ya na bolognese sauce, cheese na ham. Layer ruo mgbe ikpeazụ zukini na-anọgide ma fesaa chiiz n'elu aja aja.
Ntụziaka niile na zucchini bụ obere carb, ebe ọ bụ na enweghị pasta ma ọ bụ ụdị carbohydrate ọ bụla ọzọ.
Enwere ike iji Ricotta mee ihe karịa chiiz mozzarella na uzommeputa kwesịrị ekwesị. Ọ dị ezigbo ụtọ ma dịkwa mma karị.
nri na ọkụkọ
Nhọrọ ọzọ maka nhazi dabara adaba bụ ịgbanwe anụ ọkụkọ maka ọkụkọ shredded. Ọ dịkwa ezigbo ụtọ na ahụike.
achịcha zukini lasagna
Veryzọ dị mma iji mee zucchini lasagna gị bụ iji sie nri akwukwo nri. Wepụta na akwa, ntụ ọka na ighe. Ọ bụ nhọrọ caloric karịa, mana ọ dị ụtọ.
lasagna na agba ocha
Zucchini lasagna na bolognese ihendori nwekwara ike inwe ihendori ọcha. Mgbe ahụ ị ga-ekpo otu iko mmiri ara ehi na ngaji nke ọka ọka, nutmeg, nnu na ose ọcha. Nwuo ruo mgbe thickened na ihendori dị njikere ịgbakwunye na lasagna.
Ọ bụrụ na ị nwere ntụnye ntụ ọka zucchini lasagna ọzọ, biko dee ha na ihe ndị a n'okpuru!
Vitamin K: Hụ ihe ọ bụ maka yana ụdị nri achọpụtara na ya
Cellulite na-adịghị mma: Usoro nzuzu Joey!
Ba ọcha n'anya: Gịnị ka ọ bụ? Kedu ihe kpatara ya? Kedu ihe mgbaàmà? Mee ka o doo gị anya!